Umzila weCistercian -Ukhenketho lweemonki kunye nokunye okuninzi | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | | Ihlaziywe 11/10/2019 17:01 | España
Eyaziwayo Umzila weCistercian Yindlela eyaqala ngonyaka we-1989. Isizathu yayikukukhuthaza umxholo wokhenketho phakathi kwemimandla emithathu, eyi-Urgel eLleida, Cuenca de Barberá eTarragona kananjalo apha kwingingqi yeAlto Campo. Kwindawo nganye yoonongendi ibekwe kwaye indlela ihamba nathi ngazo.
Kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa iCistercian Route inika indlela kukhetho lwe gastronomy kunye noyilo kufanelekile ukunconywa. Yiyo loo nto ibe yenye yeembono ezintle kule minyaka idlulileyo yokuyonwabela nosapho. Unokwenza uhambo ngemoto, kodwa ezinye iinxalenye zalo zinokwenziwa ngebhayisikile okanye ngeenyawo. Fumanisa!
1 Ufika njani kwiNdlela yeCistercian
2 Zingaphi iikhilomitha xa zizonke i-Cistercian Route inayo?
3 Undwendwelo lweemonki ezintathu ezisendleleni
3.1 I-Monastery yaseSantes Creus
3.2 I-Monastery yaseSanta María de Poblet
3.3 IVallbona de les Monges Monastery
4 Indlela G-175
5 Ezinye iindawo ekufuneka ziqwalaselwe
Ufika njani kwiNdlela yeCistercian
Ukuba uhamba ngemoto, ungaya kule ndawo ngenxa ye I-AP-2 iLleida-Barcelona. Ukufika kule ndlela, ungaphuma ku-9, 10 no-11. Kukwakho nezinye iindlela ezinje ngeA-2 Barcelona-Lleida okanye iN-240 Tarragona-Lleida. Ngelixa iindlela u-C15, u-C14 okanye u-C25 nazo zisisa kule ndlela aziwayo. Ewe kunjalo, ukuba ukhetho lwakho kukufika ngebhasi, ungayenza kwakhona ngenxa yemigca, iValls-El Port d´Armentera okanye iValls-Montblanc kunye neBellpuig-Rocallaura umgca 307. Njengoko sibona, sihlala sinokukhetha njengoko iyindawo eyaziwayo.
Zingaphi iikhilomitha xa zizonke i-Cistercian Route inayo?
Ngaphambi kokuba siye kubona iindawo kunye nento esiza kuyifumana kuyo, kufuneka sicacise into. Nangona kukho iindawo ezintathu zoonongendi xa zizonke, kuyinyani ukuba zonke zinxibelelana neendawo ezahlukeneyo okanye imimandla. Yintoni esenza sijongane neendawo ezingama-65 zizonke. Inani eliphezulu ngokwaneleyo ukuba linokufumaneka kwiintsuku ezimbalwa. Ke sihlala sigxila kumanqaku aphambili kwaye kufuneka sisebenzise imoto ukuya kuzo. Umgama uwonke weNdlela yeCistercian imalunga neekhilomitha ezili-150.
Undwendwelo lweemonki ezintathu ezisendleleni
Kukho iindlela ezininzi zokonwabela le ndlela. Kodwa kuyinyani ukuba enye yezona ndawo zinomtsalane nezifunwayo ziindawo zoonongendi. Iigugu ezintathu inokubonwa phakathi kweendawo embindini wendalo, Ngeyona nto intle kakhulu inikezela ngesisu.
I-Monastery yaseSantes Creus
Yayisungulwa ngo-1168 kwaye imalunga neemitha ezingama-316 ngaphezulu komphakamo wolwandle Iqela lasebukhosini likaPedro III waseAragon okanye uJaume II. Njengoko igama layo libonisa, kwidolophu yaseSantes Creus, kwidolophu yaseAiguamurcia, eTarragona. Yabhengezwa njengesikhumbuzo sesizwe ngo-1921. Ubuhle obuyingqayizivele obugqityiweyo ziifestile ezinkulu zeglasi, igumbi lezindlu kunye neenkonzo. Ungayindwendwela ukusuka ngoLwesibini ukuya ngeCawa nge-euro ezingama-7, nangona kukho izinga elincitshisiweyo lee-euro ezingama-5 kubantu abadla umhlala-phantsi, kwiintsapho ezinkulu okanye kubantwana ukuya kuthi ga kwiminyaka eli-15 ubudala.
I-Monastery yaseSanta María de Poblet
Kule meko siza kunyuka siye kwiimitha ezingama-490 zobude kwaye yasekwa ngonyaka we-1150. Ibekwe kwiBarberá Basin, oothixo basebukhosini isithsaba saseAragon. Nangona yayinexesha layo lokwehla, yaphinda yavela kwaye inabantu abaninzi, yenye yezona monasteri zikhulu eYurophu. Ngesi sizathu, kwiminyaka ye-90 yabhengezwa njengeNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi. Zombini ucango lwayo lwe-baroque kunye ne-altarpiece yi-Damián Forment, okanye i-cloister zezinye zeendawo eziphambili zale ndawo.
IVallbona de les Monges Monastery
Kummandla wase-Urgel eLleida, sifumana indawo yeemonki yesithathu kwiNdlela yaseCistercian. Yeyona monastery yabasetyhini ibaluleke kakhulu, eyakhiwa phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX, ngendlela yamaRoma, kodwa kuyinyani ukuba ubukhulu becala yeyamaGoth. Zombini iingcango zayo, inqaba okanye i-cloister zezinye zezinto eziphambili. Ixabiso liyafana kuzo zonke iimonasteri, kodwa khumbula ukuba unako thenga itikiti elidibeneyo, ezakuba zitshiphu kancinci.
Lukhenketho lwendawo enye. Kodwa kule meko, sithetha ngendlela edibanisa ezi monasteries zintathu sele zikhankanyiwe. Kuyo, siya kufumana indawo ebhalwe uphawu ukuze uyenze ngeenyawo nangeentsuku ezahlukeneyo, ngokumakisha, ngokunyelisa kunye nezinyuko. Yindlela ejikelezayo eneekhilomitha ezili-105Njengoko sisitsho, kufuneka siyicwangcise kakuhle ukonwabela indlela nayo yonke into esiya kuyifumana kwindlela yayo. Bonke abo bantu baqhele ukunyuka intaba abayi kuba nangxaki, kuba yindlela elula, enethambeka ekufuneka lithathelwe ingqalelo. Le ndlela yenzelwe ukonwabela amabali endawo nganye, izidiliya zayo kunye nendalo.
Ezinye iindawo ekufuneka ziqwalaselwe
Njengoko sele sibonisile, ayisiqulathanga kuphela iimonasteri ezintathu kodwa ikwasivumela ukuba sityelele iindawo ezahlukeneyo kwaye nganye inekhubalo kunye nemisebenzi yazo zonke izinto esizithandayo. Iibhola likomkhulu le-Alt Camp kwaye zisinika izithethe ezinje ngeencopho zabantu okanye iiCastellers. Ngelixa simalunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka ePoblet, sifumana iMontblanc, eyenye izixeko ezibiyelweyo ukuze singalahleki.
Amanye amanqaku anokuqwalaselwa yile Imiqolomba ye-L´Espluga de Francolí, Ingcwele yaseMontserrat de Montferri, iNqaba yeNqaba yaseCiutadilla okanye ezinye zeevenkile ezikule ndawo. Kukho ukhetho oluninzi kangangokuba kuhlala kungcono ukukhetha ipakethi kwaye uyonwabele. Ngesi sizathu, kwiwebhusayithi yabo, uya kufumana izimvo ezahlukileyo, kuxhomekeka ekubeni uhamba njengesibini, njengentsapho okanye ufuna ukonwabela iintsuku ezimbalwa zegastronomy okanye, ngokuchaseneyo, inkcubeko okanye iSpa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Indlela yeCistercian
Fumana indawo yokutyela enamaphepha aMthubi